Dooniin Woyyaanee saffisaan dhidhimaa jirti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dooniin Woyyaanee saffisaan dhidhimaa jirti
Dooniin Woyyaanee saffisaan dhidhimaa jirti
Barakat Simoon, harka mirgaa Mallas Zeenaawi kan ture, aangoo gadi dhiisuun isaa beekame. Barakat jaarmaya ufii isaa ijaaree fi utubee har’aan gayetti naga dhaamachuun isaa haalli sa’aa kanatti Woyyaaneen keessa jirtu hamaa ta’uu isaatiif ragaa guddaadha. Yeroo darbe Abbaaduulaa Gammadaan aangoo isaanii fuulatti darbee ummata isaatti makame. Amma ammoo, yeroo torban tokko hin caalle keessatti, Barakat tankaarfii wolfakkaataa fudhate. Woyyaaneen jalaa ol nyaatamaa, haafa fixataa deemtee amma kan hafe Haylamaaram Dassaalenyi, Dabratsiyoonii fi Saamoraa qofa jechuuun ni danda’ama. Isaan worraa doonii irraa utaalu osoo hin taane kan woliin dhidhimu.
Oromoonni sadarkaa addaddaatti sirna kana tajaajilaa jirtan dooniin Woyyaanee isin fudhattee osoo hin dhidhimin dafaa lubbuu keessan baraaraa. Lammii sirna Woyyaaneetti dudda kennu kamiifuu golli Oromoo banaadha. Dafaa koottaa sabatti makamaa.
Kana booda abdiin Woyyaanee humna woraanaati. Humni woraanaas akka durii isiif ajajamee Oromoo irratti garajabeennaan akka hin bobbaane ifa. Lammiileen Oromooo raayyaa woraana ittisa biyyaa keessa jirtan ajaja Saamoraa fudhachuudhaan lammi keessan irratti yakka hojjachuu irraa uf qusadhaa. Qawween baadhattan tan alagaa waliin taatanii yakka Oromoo irratti ittiin hojjattan osoo hin taane tan yakka Saamoraan faati Oromoo irratti hojjatuu malan ittiin fashalsitan ta’uu qabdi. Qawwee lafa hin kaayinaa. Qawwee teessaniin Oromoo fi bu’aa Oromootiif waardiyaa ta’aa. Kana godhuu dandeennaan seenaan hunda keessan akka goototaa fi gaachena Oromootti isin yaadata.
Angawoota sirna Woyyaanee ganan ammatti abaaruu fi ‘yakka hojjataniif ni gaafatamtan’ jedhaa sodaachisuun siyaasa bilchina hin qabne ta’uun isaa hubatamuu qaba. Hanaga sirni kufuu isaa mirkaneeffannutti hundi akka ganan jajjabeessuu qabna malee bakka itti dheessan dhabsiisuun nurra hin jiraatu.
angawonni woyyaanee gadi lakkisuu
Previous articleAmeerikaan rakkoo Woyyaaneen keessa seente furuudhaaf asii fi achi jedhaa jirti
Next articleQabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona 8.4 qaqqabsiise